Vashanyi vakarwisa, vakaurawa, vakadyiwa nebere rine nzara vachifamba muNational Park
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Vashanyi vakarwisa, vakaurawa, vakadyiwa nebere rine nzara vachifamba muNational Park
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Ergaki National Park inzvimbo yakakwana yevashanyi vanoda kunakirwa nehunhu hwakanaka, nzvimbo, uye nekucherechedza kuremara kwevanhu pavanofamba panguva yedenda re COVID. Kuva chirariro chebere rine nzara kwakashandura rwendo urwu kufa uye kuva gehena mhenyu kune vatatu vanopona vanofamba.
Vashanyi vaiedza kurarama vachiri kufamba vasina bhutsu kwemaawa manomwe
eTurboNews yakaburitsa runyorwa rwe National Parks dzine ngozi muUnited States, asi hapana chinogona kusvika padyo nezvakaitika kuboka revashanyi vanobva kuMoscow kukwira paErgaki Nature Park, paki yenyika muSiberia.
Ergaki igomo renzvimbo muWestern Sayan Mountains kumaodzanyemba kweSiberia, Russia. Iyo yepamusoro poindi ndeyepamusoro Zvyozdniy. Ergaki Nature Park inzvimbo yakachengetedzwa ine makomo.
Mumwe musasa weRussia kubva kuMoscow uyo aiburitsa tende rake mupaki yenyika yeSiberia akaurayiwa nekudyiwa nebere rakasviba, apo shamwari dzake dzaive dzichiona nekuvhunduka.
Mushanyi uyo akadyiwa neiri nzara shava bheya akaonekwa munharaunda saYevgeny Starkov, makumi mana nemana.
Akafamba neboka revamwe vashanyi kubva kuMoscow uye aifamba muEggaki National Park yakakurumbira muKrasnoyarsk kumaodzanyemba kwepakati peRussia.
Vatatu vanofamba-famba muboka rimwe vakakwanisa kutiza vasina kupfeka shangu. Vakafamba rwendo rwemaawa manomwe, vasina tsoka, vachimhanyiswa nebere rinotyisa kuti vawane rubatsiro.
Ergaki Nature Park yakakomborerwa nenzvimbo dzisingaenzaniswi dzemakomo dzakavakirwa mukati memakomo akaisvonaka eWester Sayan.
Gore rega rega zviuru zvevashanyi zvinouya kuErgaki kuzoona hunhu hwakanaka, kushamiswa nematenga akazadzwa nemaruva uye makungwa akachena pamipata, kunakidzwa neseti inokwirira, matombo anoshamisa, uye kutsvaira vistas.
Iine nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakazara munzvimbo inokwana, Ergaki Nature Park inzvimbo inoyevedza yekukwira makumbo, kufamba, kukwira, kusvetuka kwechando, kuyambuka-nyika, uye kutsvedza kwemakomo.
Vanhu vanouya kupaki inoyevedza vachitsvaga kuwirirana uye kunyarara.
Park manejimendi yakanga yatumira pawebhusaiti yayo.
Mushure mechiitiko ichi chinouraya, paki yakavharwa kusvika munaMbudzi nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza.
Mumwe wevakapona akaudza renhau renzvimbo kuti vakatarisa shamwari yavo ichidyiwa vasati vatiza kuenda musango mushure mebere rikavaona.
Bazi reRussia reEcology pamwe nehutongi hwepaki vakabata mhuka iyi ndokuiuraya. Kuongorora kuri kuenderera mberi maererano nemamiriro echiitiko ichi.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 26
dolores Ruggiero anoti:
Nyamavhuvhu 1, 2021 pa17: 11
hapana anga aine pfuti ????? unopinda sei mudare risina zvombo ?????